Joogitaanka Lionel Messi ee Barcelona oo Sheeko Cusub ku soo korortay
Home Horyaalka Italy Joogitaanka Lionel Messi ee Barcelona oo Sheeko Cusub ku soo korortay
Halyeeyga Barcelona Lionel Messi ayaa lagu soo waramayaa inuu ka fiirsan doono isbedel weyn oo uu doorto inuu la sii joogo kooxda reer Catalan.
Xiddiga lixda jeer ku guuleystay Ballon d’Or ayaa xor u ah inuu la xaajoodo kooxaha kale isagoo galay lixda bilood ee ugu dambeysa qandaraaskiisa, inkasta oo mustaqbalkiisa uusan wali caddeyn waqtigaan.
Messi ayaa horay u xaqiijiyay inuu doonayo inuu sugo inta ay kooxdu dooraneyso madaxweyne cusub ka hor inta uusan sameynin go’aano adag oo ku saabsan mustaqbalkiisa ciyaareed ee soo socda, iyadoo codbixinta la qaban doono 7da Maarso.
Sida laga soo xigtay Marca , haddii madaxweynaha xiga ee Barcelona uu ka dhaadhiciyo in qorshooyinka muddada dheer ee kooxda ay la jaan qaadayaan hamigiisa, kama diidi doono inuu qalinka ku duugo heshiis cusub oo kooxda reer Catalan ah.
Warbixinta ayaa sheeganeysa in Messi iyo aabihiis ay diidan yihiin inay wadahadal la galaan kooxaha kale weli, ciyaaryahanka laftiisa ayaa la sheegay inuu ka daalay wararka la isla dhexmarayo ee ku aadan inuu u dhaqaaqayo Paris Saint-Germain ama Manchester City .
Messi ayaa dhaliyay hal goolna caawiyay mid kale kulankii ay Barcelona 2-0 kaga badisay Sevilla sabtidii, weeraryahan qaab ciyaareedka feecan ku jira ayaa haatan leh 24 gool iyo sagaal caawin tartamada oo dhan xilli ciyaareedkan.
Previous articleTababaraha Liverpool Jurgen Klopp oo hadlay tagitaanka Kooxda ee Mohamed Salah
Next articleXiddiga garabka ka ciyaara ee kooxda Arsenal Willian oo qirtay inuu doonayay inuu heshiis qandaraas ah la saxiixdo Chelsea.